【STYLE TSY LAIN'NY IZAO】 Faucet efitra fandroana volafotsy vita amin'ny chrome vita amin'ny fitaratra ary tsy manam-paharoa US Patented triple-curve endrika, mahatonga ny efitra fandroana ho ambony kokoa.
【MATERIAL BRASS SOLID】 Vita amin'ny akora Varahina Mafy avo lenta, ny faucet vanity efitra fandroana mavesatra dia milanja 5.14 Ibs ary miaro tsara amin'ny harafesina sy ny harafesina. Ny soatoavina seramika tsy misy firaka dia mipetaka mafy mba hiantohana ny fampiasana maharitra tsy misy rano mitete na mitete.
【ACCESSORIES】Misy chrome Pop-up Drain, takelaka 4-inch deck (ho an'ny fametrahana lavaka 1 na 3) ary 2 x 0.5m tucai famatsian-drano ho an'ny antoka kalitao! Voarakotry ny fiverenana maimaim-poana 90 andro sy fiantohana 5 taona.
【MORO ATAO】Ny faucet efitra fandroana tokana dia mora kokoa ny mifehy ny mari-pana sy ny fikorianan'ny rano. Ny spout avo lenta dia mamela toerana malalaka ho an'ny asa rehetra. Ny fitaovana fametrahana sy ny fampianarana rehetra dia omena, mora apetraka amin'ny tenanao tsy misy plumber!
【FANDROSOANA MATIO, TSY MITSIPIKA】Ny Neoperl Aerator dia manome fikorianan-drano lehibe kokoa sy malefaka ary mitahiry mihoatra ny 50% amin'ny fampiasana rano. Esory mora foana ny aerator amin'ny fanadiovana miaraka amin'ny fitaovana tafiditra, izay manome anao ny traikefan'ny mpampiasa tsara indrindra.
Ny chrome faucet fandroana chrome tokana chrome an'ny WOWOW dia miaraka amina mpiorina pop-up miaraka amin'ny safo-drano. Ity mpantsaka pop-up ity dia mamorona firaisan-kina iray amin'ny fantsom-baravarankely ao amin'ny fandroana anao, mba hisy fiantraikany lehibe kokoa amin'ny haingon-dakozia ao an-dakozia. Ity opération pop-up ity dia azo ampiasaina mora foana amin'ny tsindry tokana. Mila tsindry kely fotsiny vao azo ampiasaina. Noho ny endriny azo ampiharina, dia afaka manondraka rano lavitra ny rano avy ao amin'ny efitranonao izy ary milamina sy mangina.
Tsara indrindra ho an'ny vola vidiny
Ny fivezivezin'ny rano mikoriana tsara
Volavola tsy manam-paharoa sy kanto
Anisan'izany kitapo fametrahana-tena-anao
Taom-piasana 3 taona
Ampahany : 2321501C Sokajy: Faucets fandroana finday, Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana Tags: farano vita, lavanila vita, Fitondrana tokana